ပတ်​ဝန်းကျင်​မှာ ကျ​နော်​တို့ကို​စောင့်​ကြည့်​​နေတဲ့ သရဲ​တွေတကယ်​ရှိတယ်​ဆိုတာ! - 9style
ပတ်​ဝန်းကျင်​မှာ ကျ​နော်​တို့ကို​စောင့်​ကြည့်​​နေတဲ့ သရဲ​တွေတကယ်​ရှိတယ်​ဆိုတာ!
March 13, 2018 TjrxgWfzULaCgCdvDEပရလောက
သင် သရဲ၊ တစ္ဆေ တွေကို ယုံပါသလား ?
ဒါဟာလူတိုင်းမေးလေ့ရှိကြတဲ့ မေးခွန်းပါ၊ သရဲ ၊ တစ္ဆေနဲ့ ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ အရာတွေ တကယ်ရှိမရှိဆိုတာဟာ ရှေးယခင်ကတည်းကနေ ယနေ့ထက်တိုင် ငြင်းခုန်နေကြဆဲ အကြောင်းအရာတစ်ခုပါ။ ယနေ့ရှင်သန်နေတဲ့ လူသားများရဲ့ တစ်ဝက်လောက်က သရဲရှိတယ်ဆိုတာကို မယုံဘူးလို့ မငြင်းကြပါဘူး၊ တစ်ခြားတစ်ဝက်ကတော့ သိပ္ပံနည်းကျရှင်းပြနိုင်တဲ့ ကိစ္စများကိုသာ ယုံကြည်ပြီး၊ ဝိညာဉ်လောကဆိုတာ စိတ်ကူးယဉ်လုပ်ကြံဇာတ်လမ်းတွေပါလို့ ထင်မြင်ယူဆထားကြပါတယ်။သရဲကို ယုံမယုံမစဉ်းစားခင်၊ သရဲ ဆိုတာဘာလည်းလို့ မေးကြည့်ရအောင်..
ထို့ပွငျ ဓါတျပုံရိုကျရငျး ဓါတျပုံတှထေဲမှာ ပါလာတယျဆိုတဲ့ ဝိညာဉျပုံတှလေညျး အမြားအပွားထှကျပျေါခဲ့ပါတယျ။ ဒါတှဟော ကှနျပွူတာနဲ့ ပွုပွငျဖနျတီးထားတာလား၊ တကယျ့အစဈအမှနျပဲလားဆိုတာတော့ မသိနိုငျပါဘူး။ သရဲကို ကိုယျတိုငျကိုယျကြ တှေ့ဖူးပါတယျဆိုပွီး ထှကျဆိုရှငျးလငျးသူမြားလညျး ရှိပါသေးတယျ။
သမီးအတွက် မိခင်ကရိုက်ပေးသည့် ဓာတ်ပုံတွင်ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ သရဲနှစ်ကောင်ပါဝင်နေ
စာသင်ကျောင်းမှာ သရဲနဲ့စကားပြောနေတဲ့ ကလေး ဗွီဒီယိုဖိုင် နာမည်ကြီးနေ
မြန်မာနိုင်ငံဖွား အိန္ဒိယသမ္မတကတော် (First Lady) နှစ်ဦးက ဘယ်သူတွေလဲ